Vivo X50 na-enweta mmelite nke Funtouch OS 11 na gam akporo 11 | Gam akporosis
Ozi ọma maka ndị ọrụ nke Vivo X50- Ekwentị na-anabata mmelite gam akporo 11 n'okpuru nsụgharị usoro Funtouch 11.
Ejiri ngwaọrụ ahụ na July afọ gara aga na Funtouch OS 10.5, ka anyị cheta. Mmelite ohuru nke eweputara ugbu a maka ihe nlere a, dịka ị kọwara PiunikaWeb, A na-etinye ya ugbu a nwayọ nwayọ na naanị maka ụfọdụ ndị ọrụ ahọpụtara, dị ka ọ na-adị na mbụ Xiaomi na mmelite beta kwụsiri ike.
Vivo X50 na-enweta Funtouch OS 11 na gam akporo 11
Ngwunye ngwa ngwa ọhụrụ a maka ekwentị a ga-eji nwayọọ nwayọọ kesaa iji chọpụta n’ụzọ dị mfe nsogbu ọ pụrụ ịkpata, ọ bụrụ na o chee ha; ọ bụrụ otu a, mmelite ahụ ga-akwụsị.
India bụ mba ebe a na-achụsasị ngwugwu ngwa ngwa ọhụụ maka Vivo X50. Mgbe ahụ, n'ime ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu ole na ole, ọ ga-agbasawanye ọtụtụ ndị ọrụ na mba na mpaghara ndị ọzọ dịka Europe.
Ihe mgbanwe mgbanwe kwuru bụ Funtouch OS 11 na gam akporo 11 dị ka ihe ọhụrụ kachasị mkpa, yana ihe a niile pụtara dị ka interface dị mma yana njiri mara mma. Tụkwasị na nke ahụ, OTA na-abịa na ọtụtụ ndozi ahụhụ, ọtụtụ njikarịcha ngwanrọ, na ndozi usoro kwụsiri ike.
Vivo X50 bụ ekwentị nwere ihuenyo AMOLED 6.56 nke anụ ọhịa, ihe ngosi FullHD + nke pikselụ 2.376 x 1.080 na ọnụọgụ ume nke 90 Hz. jikọtara ya na RAM nke 730 GB na ebe nchekwa dị n'ime nke 8/128 GB nke ikike.
Batrị ọ na-eburu bụ 4.200 mAh ma kwekọọ na teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa 33 W. Igwefoto azụ nke mobile bụ 48 + 13 + 8 + 5 MP, ebe nke dị n'ihu bụ 32 MP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vivo X50 na-enweta Funtouch OS 11 update na gam akporo 11